10 Loharano mahafinaritra indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Loharano mahafinaritra indrindra any Eropa
Misy mari-toerana mahafinaritra sy mahafinaritra maro any Eropa. Ao ambadiky ny zoro rehetra, misy tsangambato na zaridaina hitsidihana. Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra sy mahavariana dia loharano mahafinaritra, ary nifidy tanana izahay 10 amin'ireo loharano mahafinaritra indrindra any Eropa.
Musical, tafahoatra, Mahavariana ny loharanon'i Eropa. Avy any Paris ka hatrany Budapest, ao afovoan-tanàna na amin'ny nosy, ireo 10 loharano mahatalanjona mendrika fitsidihana tanteraka.
1. Loharano Trevi any Roma
Ny loharano lehibe sy malaza indrindra any Roma dia ny loharano Trevi. Ity loharano mahafinaritra ity dia miraraka 2,824,800 rano toratelo isan’andro. koa, tamin'ny andron'ny romana dia loharano iray afovoany io. Noho izany, ho hitanao fa ny loharano Trevi eo amin'ny sampanan-dalana misy lalana telo "Tre Vie" ireo loharano telo lalana.
Raha tsy fantatrao, ny loharano Trevi dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona fito any Eropa. Ary noho izany, tsy mahagaga raha ny loharano mahafinaritra indrindra any Eropa dia naneho sarimihetsika maro, toy ny Andro fialantsasatra romana.
Aiza ny loharano Trevi any Roma?
Ny loharano Trevi mahatalanjona dia 10 metatra fotsiny miala ny Steps Spanish. Azonao atao koa ny mitondra ny lamasinina mankany amin'ny gara Barberini.
2. Loharano Trocadero
Ny endrika mahavariana indrindra amin'ny loharano Trocadero dia ny loharanon'i Warsaw eo afovoany. Miendrika basin-drano io, amin'ny 12 loharano manodidina azy. Ary noho izany, ny toerana misy ny Eiffel Tower sy ilay loharano dia epic tanteraka.
The zaridaina mahafinaritra ary loharano dia ampahany amin'ny Trocadero Palais tamin'ny voalohany, noforonina tao 1878 miaraka amin'ny exposition universal. Manatrika ny reniranon'i Seine, eo afovoany Palais du Chaillot, ary eo anoloana ny Tilikambo Eiffel, ny loharano Trocadero no toerana fitsangantsanganana tonga lafatra any Paris, sy Eoropa.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Trocadero?
Afaka mankany amin'ny Gardens of Trocadero sy ny loharano ianao amin'ny metro, mankany amin'ny gara Trocadero.
3. Ny loharano Latona any Versailles
Misy 55 loharano ao amin'ny zaridainan'i Versailles, fa ny tsara indrindra sy mahavariana indrindra dia ny loharano Latona. Ny loharano La Latona dia aingam-panahy avy amin'i Ovid's Metamorphoses, Latona renin'i Appollo sy Diana, sary miaraka amin'ny zanany amin'ity loharano be voninahitra ity.
Miatrika ny lakandrano lehibe, afaka mahita sy mankafy mora foana ny fahitan'ny Mpanjaka Louis XIV ianao na avy aiza na aiza any Versailles. Mandritra ny vanim-potoana lehibe dia afaka mankafy ny seho mozika loharano izay misy ianao 3 isan-kerinandro.
Ahoana no ahatongavana any Latona?
Ny lapan'ny Versailles dia ao amin'ny tanàna Versailles, fotsiny 45 minitra mandeha lamasinina avy any Paris. Azonao atao ny mandeha lamasinina mankany amin'ny gara Versailles Chateau Rive Gauche. Avy eo dia an-tongotra kely fotsiny avy eo amin'ny gara mankany amin'ny lapan'ny mpanjaka sy ny zaridaina.
4. Ilay Loharano Efteling
Ny seho loharano mozika manaitra indrindra any Eropa dia ny fampisehoana loharano mozika ao amin'ny valan-javaboary Efteling. Ho gaga ianao amin'ny 12 jiro minitra sy rano miseho, izay ny sahona dia manova ny rano ho lasa seho milomano tsara tarehy.
Ny rafitra loharano Aqunura dia namboarina ho an'ny Efteling 60 tsingerintaona. Hamaranana, ny seho mozika dia famaranana lehibe ny dia ataon'ny fianakaviana mankany amin'ny mahafinaritra Valan-javaboary misy lohahevitra.
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny loharano efteling?
Ity valan-javaboary mahatalanjona ity dia adiny iray monja miala an'i Amsterdam, ka tonga lafatra ho an'ny fianakaviana mahafinaritra fitsangatsanganana an-tongotra avy any Amsterdam.
5. 1o Loharano mahafinaritra indrindra any Eropa: Trafalgar Fountain
Mermaids and Tritons no sarivongana afovoan'ny loharanon'ny Trafalgar Square. Na izany aza, tsy toy ny loharano hafa, tsy misy angano ao ambadiky ny safidin'ireo zavaboary ranomasina ireo. Ny loharano tsara indrindra any London dia namboarina tany am-boalohany 1841 hampihena ny toerana malalaka ho an'ny mpanao fihetsiketsehana.
Hahita ny loharano Trafalgar Square eo anoloana ny National Gallery any London ianao. Ankoatry ny, tokony ho fantatrao fa avy any London ny mankafy ny Krismasy. Noho izany, hanana antony lehibe hafa hitsidihana ny iray amin'ireo loharano tsara indrindra any Eropa ianao.
Ahoana no ahatongavana any amin'ny loharano Trafalgar any London?
Azonao atao ny mandeha mankany amin'ny gara Charing Cross amin'ny toerana rehetra any London.
6. Swarovski Lohataona any Innsbruck
Ny faritr'i Tyrol dia iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra any Aotrisy, ary koa tranon'ny foiben'ny Swarovski. Ny loharano Swarovski dia miorina ao amin'ny Swarovski Crystal Worlds, sarotra ny fialamboly sy ny sakafo. Natao ho an'ny mpanamboatra vera kristaly tokoa izy io, Swarovski.
Ny loharano dia miendrika lohan'ny lehilahy. Izy io dia iray amin'ireo loharano tsy mahazatra any Eropa, ary mendrika fitsidihana tokoa rehefa mitsangatsangana any Austria ianao.
Ahoana no ahatongavana any Loharano Swarovski In Innsbruck?
Ianao dia afaka mandeha lamasinina avy any Innsbruck mankany Swarovski afaka adiny iray latsaka.
7. Jet Deau Any Genève
Jet rano, fiaramanidina rano amin'ny teny anglisy, no loharano avo indrindra any Eropa ary mety hahatratra azy 400 metatra. voalohany, ny loharano dia natsangana mba hifehezana ny tsindry tafahoatra amin'ny orinasa hydraulic ao La Coulouvreniere, nefa vetivety dia lasa mariky ny fahefana.
Ary noho izany, sarotra be ny tsy mahita an'i Jet Deau rehefa mitsidika an'i Genève ianao. Raha ny tena izy, afaka mahita ny lalanao mankany amin'ny farihin'i Genève ianao, raha manaraka ny jet jet fotsiny ianao.
Lyon mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Geneva
Bern ny vidin'ny fiaran-dalamby Geneva
8. Loharano Stravinsky, Paris
Ny loharano Stravinsky ao Center Pompidou dia fanomezam-boninahitra mozika an'ilay mpamoron-kira rosiana, Igor Stravinsky. Molotra miloko marevaka, badina, sy sary sokitra mahatsiravina hafa mahatonga an'ity loharano eccentric ity ho iray amin'ireo loharano tsy mahazatra any Eropa. Ny mpanao sary sokitra dia noforonin'i sculpture Jean Tinguely sy ilay mpanao hosodoko Niki de Saint Phalle. Samy manana ny fomba fanaony ny mpanakanto roa: indostrialy Dadaista amin'ny lafiny iray, ary mamiratra etsy ankilany. Noho izany, miara -, mankalaza ny mozika klasika maoderina tsara indrindra tamin'ny taonjato faha-20 ny sangan'izy ireo.
Azo antoka fa, hisarika ny sainao ny loharano Stravinsky rehefa mankafy azy akaiky ianao. Tena toy ny fijoroana vavolombelona amin'ny fampisehoana kodiarana eo am-baravaran'ny foibe Pompidou malaza eran-tany.
Ahoana no ahatongavako any Loharano Stravinsky?
Fontaine Stravinsky dia eo am-baravarana afovoan'i Pompidou. Azonao atao ny mandray ny tobin'ny Metro mankany amin'ny Hotel de Ville.
9. Ny loharano mozika ao amin'ny nosy Margaret ao Budapest
Ny loharano lehibe indrindra any Hongria dia mampiseho fampisehoana mozika sy laser mahafinaritra isan'ora. Mey hatramin'ny Oktobra, no fotoana tsara indrindra hitsidihana ny Nosy Margaret any Budapest. Afaka mankafy piknik ianao eo am-pijerena ny fampisehoana rano sy jiro mahavariana.
Endri-javatra iray hafa izay mahatonga ny loharano Krizikova ho iray amin'ireo 10 loharano tsara tarehy indrindra any Eropa, dia ny hoe misy drafitra fampisehoana mozika ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe.
Ahoana no ahatongavako any Loharano Margaret Island?
Afaka mankany amin'ny loharanon'ny Nosy Margaret ianao avy eo afovoan-tanàna Budapest amin'ny fitateram-by.
10. Loharano Krizik any Prague
Ilay loharano mandihy, Loharano Krizik, dia eo akaikin'ny ivon-toeran'ny fampiratiana Prague. Manomboka amin'ny 8 hariva hatramin'ny misasakalina, ianao dia afaka mankafy ny jiro tsara indrindra sy ny mozika tsara indrindra. Misy 4 seho rehefa samy hafa tanteraka amin'ny mozika sy jiro ny tsirairay.
Ny loharano mozika Krizik dia natsangana tao 1891 ho an'ny foibe fampirantiana. Nampiala voly ny vahoaka nanomboka teo. Ny hariva miaraka amin'ny seho dia hifarana tsara amin'ny andro mahafinaritra any Prague.
Ahoana no hahatongavako any Krizik?
Afaka mankany amin'ny loharano Krizik ianao amin'ny alàlan'ny lamasinina mankany amin'ny gara Vystaviste.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao hahita ny tapakilan'ny fiaran-dalamby mora indrindra amin'ny loharano mahafinaritra any Eropa.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “loharano mahafinaritra indrindra 10 any Eropa ve ianao"Eo amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manolo ny tr to pl na nl sy fiteny maro voafidinao.
BeautifulFountains EuropeTraveling Loharano LoharanoInEurope MusicalFountain Train Travel